Nyora Wangu Wekupedzisira Pepa mu Zimbabwe
Unoda rubatsiro rwehunyanzvi kunyora? Tora bepa remhando yepamusoro kubva pane rakanakisa Nyora Pepa Rangu Rino mu Zimbabwe yakanyorerwa kumatanho ese edzidzo.
Matipi Ekunyora Kwangu Temu Pepa
Vadzidzi vanowanzo fanirwa kunyora mapepa etemu echikoro uye mamwe masangano edzidzo kuratidza kwavo kosi basa uye kufambira mberi. Pepa iri zvakare chiratidzo chakanaka chekuti mudzidzi akanyatsogadzirira bvunzo sei. Asi vadzidzi vanowanzoona kuti vanomanikidzwa nepfungwa yekunyora yakadai yakadai basa.
Kunyora rondedzero hakusi nyore sezvaungafungidzira. Iwe unofanirwa kugadzirira rakanyatsogadzirwa pepa reti pepa kana iwe uchida kuti ribudirire. Zvinogona kunge zvisingaite kunge zvakaoma pakutanga. Asi zvinotora kuita, nguva, uye kuranga.
Pakunyora temu pepa rechikoro kana mamwe masangano, vadzidzi vanofanirwa kuziva kuti zvinoda huwandu hwakawanda hwekuronga. Uyu ndiwo mumwe mugove unoda nguva yakawanda. Zvinoda kumwe kuedza kwavari, zvakare. Ivo vanofanirwa kufunga kuburikidza nebepa nemazvo, uye ivo vanofanirwa kutevedzera iwo mafambiro avakapihwa. Iwe haugone kupa rondedzero kune vadzidzi vese, kunyanya kana iwe uchida kuve nechokwadi kuti vanyatsoiverenga.
Ipfungwa zvakare yakanaka kutenga yakanaka temu bepa gwaro. Kune akawanda magwara epamhepo aripo. Imwe yeanonyanya kufarirwa ndeyeye AP Term Mapepa gwara. Inopa vadzidzi nhanho-nhanho-mirairo yekunyora pepa reti. Iwe unogona kusarudza kutenga uyu mutungamiri kana iwe uchiraira yako temu mapepa kit kana kutenga imwe zvakasiyana. Izvo hazvizongokutungamira iwe maererano nemaitiro ekunyora rondedzero asi zvakare zvinokubatsira iwe apo purofesa anokupa iwe nguva yekupedzisira yekupedzisa.
Kana iwe usiri kuda kubhadhara muripo, unogona zvakare kuhaya mupi webasa kuti akunyorere iwe. Vamwe vanopa masevhisi vanobhadharisa kamari kadiki kekunyora rondedzero yako. Asi ivo vanogona kukupa iwe matipi ekuti unganyora sei rinonakidza izwi bepa, izvo zvinoita kuti maitiro ese ave nyore.
Asi iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti urikupija zviri pamutemo vanopa sevhisi. Izvi zvakakosha nekuti kune vamwe vanopa rubatsiro vanongova mushure memari yako. uye haizokupe chero matipi anobatsira ekuti unganyora sei izwi rako bepa.
Nzira yakanakisa yekuziva nezvevapi vevashandi ndeyetaneti. Tarisa mawebhusaiti anopa aya masevhisi.
Kunyora rondedzero yechikoro kana mamwe masangano kungave kuri kutyisa basa. Asi kana iwe ukatenga gwara rakanaka, ita shuwa kuti iwe unoziva kunyora rondedzero yechikoro.
Kana iwe uchinge waziva kunyora temu mapepa, zviri nyore kuti iwe upinde munyatwa kana ukarasikirwa nenguva dzakatarwa dzekupedzisa temu mapepa. Ita shuwa kuti iwe unoseta yako yekupedzisira nguva kuitira kuti iwe usarasikirwe nenguva dzakatarwa.
Panyaya yerondedzero iwe yauchanyora yako temu mapepa, hapana mutemo unoti iwe unofanirwa kusanganisa zvese. Unogona kuwedzera zvimwe zvinhu zvawakaona kana kunzwa, kana uchida. Nekudaro, kana purofesa wako akakumbira rumwe ruzivo, iwe unofanirwa kuripa kuti upe zvakadzama papepa.
Kusvika pakuumbwa kweshoko remapepa, zvinoenderana napurofesa wako. Zvinoenderana nekuti unonyatsoziva sei chidzidzo uye musoro wenyaya uyu nezve
Zvakanakira iwe kuti udzidze kunyora mapepa etemu kutanga usati waedza kunyorera mapepa etemu. Sezvo purofesa wako angakupa migove mukirasi, unogona kutarisa izvi kuti uwane pfungwa yezvaunofanira kuita. Kana iwe uchiziva kunyora, hauzosiyiwa kumashure nemapurofesa maererano nekutsvaga. Zvakare, zvirinani kuti iwe uve wakagadzirira chero chero rudzi rwebasa kuchikoro nekuti purofesa wako anotarisira kuti iwe uite rako rechikoro nguva isati yakwana.
Kana iwe uri kufunga nezve kutenga rondedzero munyori, zvakanakisa kutarisa kana iye wauri kuda kutenga anogona kukupa mazano ekunyora. uye ndedzipi mhando dzerondedzero yekunyora.